12 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး Escape အခန်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 12 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး Escape အခန်းများ
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, ကြောက်စရာ, အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည်, မြေအောက်ကမ္ဘာ, ဒါမှမဟုတ်ရှေးဟောင်းအိမ်တွေ, အဆိုပါ 12 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်ရန်အခန်းများ, နှလုံးအားနည်းသူများအတွက်မဟုတ်ပါ. ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, ရဲရင့်သူသာလျှင်, ကျွမ်းကျင်သောအသင်းကစားသမားများနှင့်ပဟေိချစ်သူများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ရာတွင်အောင်မြင်လိမ့်မည်, ကြာရှည်မေ့ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ပါ. မင်းမှာဘာတွေရှိတယ်လို့မင်းထင်ရင်, ထို့နောက်ဤအရာများထဲမှတစ်ခုကိုယူပါ 12 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်ရန်အခန်းများ, နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးစားပါ.
1. Sherlocked Escape Room အမ်စတာဒမ်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးစုံထောက်ကိုနာမည်တပ်သည်, Sherlocked escape room သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်ရန်အခန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. Sherlocked တွင်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်2အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများ; ဗိသုကာပညာရှင်သို့မဟုတ် Vault. တစ်ခုဖြစ်သည် 60 မိနစ်ရှည်, ဒုတိယသည် 80 မိနစ်ရှည်, အုပ်စုနှစ်ခုလုံးအတွက်စံပြဖြစ်သည်4လူထု, မိဘများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအားအလွန်ကြိုဆိုသည်.
သို့သျောလညျး, လွတ်မြောက်ရန်အခန်းနှစ်ခုကြားအဓိကကွာခြားချက်သည်သင်တန်းဖြစ်သည်. ဗိသုကာပညာရှင်သည်သင့်အားကမ္ဘာပေါ်ရှိလျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်အသစ်တွေ့ရှိသောအခန်းထဲတွင်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်. သို့သော်ငြားလည်း, Vault သည်သင်အားအလွန်အကာအကွယ်ရှိသောဘေးမှအဖိုးတန်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုခိုးယူရန်ပုဂ္ဂိုလ်များအားသူခိုးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်. သင်မကြိုးစားမီနှင့်မအောင်မြင်မီများစွာ, ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ဂိုဏ်းကဒီလျှို့ဝှက်ပြီးလှည့်စားတဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာအောင်မြင်ဖို့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်. ဒါကြောင့်, ဤလွတ်မြောက်ရန်အခန်းသည်ပူးပေါင်းသည် အမ်စတာဒမ်တွင်လုပ်ရန်အထူးခြားဆုံးအရာများ.
2. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Escape Hunt
Escape Hunt အခန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနေရာများစွာ၌ဌာနခွဲများရှိသည်, အင်္ဂလန်မှစင်္ကာပူသို့. သင်ဟာထူးခြားတဲ့သတ္တဝါတွေကိုချစ်တယ်, ဒစ္စနေးပုံပြင်များ, နှင့် Alice, ထို့နောက်သင်သည်ဤလွတ်မြောက်ရန်အခန်းကိုချစ်ပြီး Escape Hunt ၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ခရီးသွားမည်, နိုင်ငံတိုင်း၌.
Escape Hunt အခန်းတွင်ထွက်ပြေးရန်အခန်းများစာရင်းရှိသည်, နိုင်ငံတိုင်းမှာကွဲပြားပါတယ်. Marseilles မှာ, Houdini သည်သူတို့ကိုဆပ်ကပ်ပွဲကြီးတွင်ကွယ်ပျောက်စေပြီးနောက်သူငယ်ချင်းများကိုသင်ရှာဖွေလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ် UK မှာ Alice နဲ့သူငယ်ချင်းတွေက Wonderland ကိုကယ်ပါ. ဒါကြောင့်, ကမ္ဘာ့ပဟေိများနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များသည်ဥရောပနှင့်အာရှတစ်လွှားရှိမြို့ကြီးများတွင်သင်၏အကူအညီနှင့်အရင်းအမြစ်များလိုအပ်သည်.
3. လန်ဒန်တွင် Enigma Quest
Finsbury တွင်တည်ရှိသည်, Thames မြစ်နှင့် London Bridge နှင့်မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိသည်, Enigma Quest လွတ်မြောက်ရန်ကမ်းလှမ်းချက်3အံ့သြဖွယ် Quest များ. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခရီးသွားရင်, ကလေးများနှင့်မိသားစု, သို့မဟုတ်စွန့်စားရှာဖွေရန်စုံတွဲတစ်တွဲ, ထို့နောက်သင်သည်ရေနက်ရေငုပ်သင်္ဘောမှလွတ်မြောက်ရန်အခန်းနှင့်ပေါင်တစ်သန်းဓါးပြတိုက်မှုကြားတွင်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်.
သင်ဟာ adrenaline ရှာဖွေသူတစ် ဦး ပါ, နောက် Thelma နှင့် Louise ဖြစ်နိုင်သည်? ထို့နောက် Enigma Quest ရှိပဟေိများသည်သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်. Mission Wavebreak တွင်သင်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်လိမ့်မည်, နှင့်သန်းပေါင်ဓါးပြတိုက်၌, ခေတ်သစ်သမိုင်းတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးဆုအတွက်သင်ပူးပေါင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်, မင်းမှာဘာတွေရှိတယ်လို့ထင်ရင်, ထိုအခါ စကားထာ Quest လန်ဒန်မြို့လယ်ရှိ escape room သည်သင့်အတွက်မိနစ် ၆၀ ကြာစွန့်စားခန်းတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်.
4. Paradox စီမံကိန်း 2: အေသင်စာအုပ်ဆိုင်မှ Escape Room
သင်ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့အခန်းထဲရောက်နေတာ, ထို့နောက် Paradox Project2အေသင်မြို့သည်အဆုံးစွန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရန်အခန်းအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်. ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလွတ်မြောက်ရန်အခန်းများနှင့်မတူပါ, Paradox Project မစ်ရှင်သည်အေသင်ရှိ neoclassical အိမ်တစ်လုံးလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သည်. ဒါအမှန်ပဲ, သင်၏ရှာဖွေမှုသည်ဤထူးခြားသောအိမ်၌အခန်းများစွာနှင့်လျှို့ဝှက်ကျမ်းပိုဒ်များပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်.
ထို့အပြင်, စာအုပ်ဆိုင်ထွက်ပေါက်အခန်းသည် 200 မိနစ်မစ်ရှင်, ၎င်းကိုအလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်သည် 5-6 လွတ်မြောက်ရန်အခန်းများ. ဒါကြောင့်, သင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်နေလိမ့်မယ်, ၎င်းသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောလွတ်မြောက်ရန်အခန်းအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်. ပဟေိများဖြင့်လှပစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအစုံ, နေရာများစွာ, လှေကား, အေသင်မြို့ရှိအစစ်အမှန်စာအုပ်ဆိုင်အတွင်း၌စိတ်လှုပ်ရှားစွာရှာဖွေသူများကိုစောင့်ကြိုနေသည်.
5. မစ္စတာ. X Mystery House Shanghai
ငြီးငွေ့လာရင် မိုးမျှော်တိုက်များ ရှန်ဟိုင်းမှာ, မစ္စတာ. X ၏ပဟေိအိမ်သည်ရှုပ်ထွေးသောမြို့မှအလွန်ကောင်းသောအနားယူမှုဖြစ်လိမ့်မည်. ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထွက်ပြေးရန်အိမ်ရှိသည်5အခန်းများ, တစ်ခုချင်းစီကိုဖြေရှင်းဖို့မတူညီတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိတယ်. မင်းကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတစ်နာရီလောက်သော့ခတ်ထားတယ်, ကြီးကြီးမားမားပုံကိုမသိဘဲ. စိန်ခေါ်မှုကအခန်းထဲရှိအရာအားလုံးကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်, နှင့်လမ်းပေါ်, မင်းအခန်းထဲကထွက်ဖို့ကြိုးစားပြီးရှာဖို့.
မစ္စတာ. X ၏လွတ်မြောက်ရန်အခန်းများသည်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများပြည့်နှက်နေသည်. ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားစိတ်ကူးယဉ်အခန်းများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်, ဒီမှာမင်းရဲ့အဖွဲ့ကအာရုံအားလုံးကိုသုံးဖို့လိုလိမ့်မယ်, လေ့လာရေး, နှင့်ယုတ္တိဗေဒ, အခန်းထဲမှထွက်ရန်နည်းလမ်းကိုရိုးရှင်းစွာရှာဖွေပါ. မစ္စတာ. X Mystery House သည် Bridge ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည် 8 II, Huangpu ခရိုင်, စွန့်စားခန်းသည်ဝင်ပေါက်မှတည့်တည့်စတင်သည်.
6. လှေပြိုင်ပွဲများနှင့် SOS Escape Rooms Dublin
ဒပ်ဘလင်မြို့၌ထူးခြားသော Escape Boats အခန်းသည်ထိပ်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည် 10 ကမ္ဘာပေါ်ရှိလွတ်မြောက်ရန်အခန်းများ. ဒီမှာ, မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်စွမ်းနဲ့စွမ်းအားတွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးအချုပ်ခန်းထဲကနေနည်းလမ်းတစ်ခုရှာရမယ်. တကယ်ပါပဲ, Escape Boats နှင့် SOS အခန်းများသည်လှေပေါ်တွင်တည်ရှိသည်, Dublin dock မှ.
ထိုကွောငျ့, Escape room Boats နှင့် SOS များသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအထူးလွတ်မြောက်သောအခန်းအချို့ဖြစ်သည်. ထွက်လမ်းကပဟေိတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်, ကုဒ်ကွဲအက်ခြင်း, နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြေရှင်း. အကယ်၍ လွတ်မြောက်သောအခန်းသည်အထူးအခမ်းအနားတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ကုမ္ပဏီသည်လက်မှအစားအစာကိုပင်စီစဉ်နိုင်သည် အနီးအနားအရက်ဆိုင်များ တူးမြောင်းအထိုင်.
7. ParaPark Escape အခန်း Budapest
Budapest ရှိအကြီးမားဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်သည် ParaPark လွတ်မြောက်ရန်အခန်းအောက်ထပ်တွင်သင့်ကိုစောင့်နေသည်. မင်းဥရောပကိုပထမဆုံးထွက်ပြေးတဲ့အခန်းထဲမှာသဲလွန်စတွေရှာပြီးမင်းဆင်းလာလိမ့်မယ်. ဒီမှာ, သင်မှုခင်းတစ်ခုတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်, Twin Peaks သည်စိတ်အားတက်ကြွစေသည်. ဒါကြောင့်, စုံထောက်ကစားရန်ပြင်ဆင်ပါ, ပြီးတော့မင်းရဲ့အဖွဲ့ကိုအကွက်ထဲကကူညီလိုက်ပါ, အကွက်ထဲကမင်းထင်တဲ့အတိုင်း, သို့မဟုတ်မြေအောက်ခန်း, ကြောင်းကိစ္စများအတွက်.
မှုခင်းမြင်ကွင်း 95 NYC မှာရှိတယ်, လူဆိုးဂိုဏ်းများသည်လမ်းများပေါ်၌တိုက်ခိုက်ကြသည်, နှင့်အဖြစ်ဆိုးဖြစ်ပျက်. ဒါကြောင့်, သဲလွန်စတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မင်းကိုခေါ်လိမ့်မယ်, တစ်နာရီမကုန်မီရာဇဝတ်ကောင်ကိုရှာရန်စာရွက်များကိုသိမ်းဆည်းပါ. ကောက်ချက်ချရန်, ParaPark လွတ်မြောက်ရန်အခန်းသည်စိတ်နှလုံးသည်းထိတ်ရင်ဖိုနှင့်ရာဇ ၀ တ်ဇာတ်လမ်းနှစ်သက်သူများအတွက်ဖြစ်သည်.
အခန်းရှိသည်4မစ်ရှင်, တစ်ခုစီ 75 မိနစ်ရှည်, စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုစီ, ပြီးတော့မင်းတစ်ယောက်ချင်းစီကိုအခြားအာကာသတစ်ခုဆီအချိန်မီသွားခိုင်းလိမ့်မယ်. Humboldt တက္ကသိုလ်၌ရတနာရှာဖွေခြင်း, အကြီးမြတ်ဆုံးတစ္ဆေမုဆိုးနှင့်အတူအလုပ်သင်, သို့မဟုတ်ဘာလင်လူသတ်သမားအားဖမ်းရန်မဟာဘာလင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးကိုကူညီခြင်း, ဤမစ်ရှင်များသည်အလွယ်တကူကြောက်ရွံ့သောကစားသူအတွက်မဟုတ်သည်မှာထင်ရှားသည်.
ထိုကွောငျ့, မင်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုသေသေချာချာရွေးပါ, ဥာဏ်ကောင်းနှင့်ပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ထားသည်, ဝတ်စားဆင်ယင်မှု, သတ္တိရှိတဲ့နှလုံးသား. ဘာလင်ရှိအခန်းလွတ်တစ်ခုသည် 2017 Golden-Lock ဆုရှင်, မည်သည့်အခန်းလွတ်ဝါသနာအိုးကိုစိန်ခေါ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ထို့အပြင်, ဤလွတ်မြောက်သောအခန်းသည်ဘာလင်သို့သွားရန်လုံးဝထိုက်တန်သည်, ဒုတိယနှင့်ပဉ္စမအကြိမ်များအတွက်.
ပဲရစ်ရှိဤပုံမှန်မဟုတ်သောလွတ်မြောက်ရေးအခန်းသည်သတ္တိအရှိဆုံးဝါသနာရှင်များအတွက်သာဖြစ်သည်. မင်းနာမည်ကိုမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်, Catacombs လွတ်မြောက်ရေးအခန်းသည်ပဲရစ်မြေအောက်ကမ္ဘာရှိအမှောင်ထုသို့သင်ရာစုနှစ်များစွာကြာသည်. ပါရီမြို့သည်အလွန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် လှပသောမြို့ကြီးများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ, ၎င်း၏ catacombs များသည်ကြောက်စရာကောင်းသည်, အချို့ကနည်းနည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်.
ထို့ကြောင့်, သင်ဟာနှလုံးသားကိုစွန့်စားသူတစ်ယောက်ဆိုရင်, ကြက်သီးထခြင်းသည်ထူးဆန်းသောခံစားချက်မဟုတ်ပါ, ထို့နောက် Catacombs လွတ်မြောက်ရန်အခန်းကိုကြိုတင်မှာပါ. လွတ်မြောက်ရန်အခန်းဂိမ်းကိုကစားခြင်းသည်ဥယျာဉ်သို့သွားခြင်းမှလန်းဆန်းသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုနှင့်လန်းဆန်းသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်, သို့မဟုတ် စျေးဝယ်အတွက် ပဲရစ်.
10. ဟယ်ရီပေါ်တာ Escape Escape Prague
Harry Potter ၏အခန်းကိုထွက်ပြေးခြင်းသည်မိသားစုတာဝန်ဖြစ်သည်. အပြင်အဆင်နှင့်ပဟေိများသည်ကလေးများနှင့်လိုက်ဖက်သည်, ကလေးများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုကိန်းဂဏန်းများနှင့်. ထို့အပြင်, သင်နှင့်ကလေးများသည်မှော်ကြိမ်လုံးများရရှိလိမ့်မည်, ထို့ကြောင့်သူတို့သည် Harry Potter ၏အထူးကမ္ဘာကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်.
Prague ရှိ Harry Potter လွတ်မြောက်ရေးအခန်းသည် 60 မိနစ်မစ်ရှင်. ဤမှော်နာရီအတွင်း, မင်းရဲ့အဖွဲ့ကလျှို့ဝှက်ပစ္စည်းသုံးခုကိုရှာဖွေဖို့လိုလိမ့်မယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ ထွက်ပြေးရန်အခန်း, Harry Potter Escape Room သည် Prague ရှိမိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်ဖြစ်သည်.
11. ရောမမြို့ရှိ Villa Borghese တွင် Outdoor Escape ဂိမ်း
လူတိုင်းအီတလီသို့ သွား၍ အစားအစာစားကြသည်, ဗီလာများ, နှင့် ဒေသခံစပျစ်ရည်ကို. လွတ်မြောက်ရန်အခန်းများ၏အရူးအမူးဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းပိုက်သည်, အီတလီ၏ထိပ်တန်းနေရာများသည်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်ရန်အခန်းများဖြစ်လာသည်. ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Villa Borghese သည်ato start point ဖြစ်သည် 2.5 ပဟေိဖြေရှင်းရေးနာရီ. ဗီလာသည်သင်လှေမှသဲလွန်စမှသဲလွန်စသို့လှေဖြင့်ထွက်ခွာမည့်ပြင်ပလွတ်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဤထူးခြားသောလွတ်မြောက်ရေးအခန်းသည်ရောမတွင်ရှိသည်. ဒါကြောင့်, Colosseum ကိုသင်ပြီးစီးသောအခါ, အီတလီမြို့တော်၌လှပသောလျှို့ဝှက်နေရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. ကောက်ချက်ချရန်, Villa Borghese သည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးအပြင်ဘက်အခန်းလွတ်ဖြစ်သည်. မြေအောက်ခန်းတွေနဲ့မတူဘူး, စာကြည့်တိုက်များ, နှင့် catacombs, ဒီမှာမင်းအလှဆုံးအီတလီရှုခင်းမှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိမ့်မယ်.
12. ဓာတ်ခွဲခန်း Escape Room Bunschoten
အမ်စတာဒမ်မှတစ်နာရီ, Bunschoten ရှိဓာတ်ခွဲခန်းအလွတ်ခန်းသည်မောင်းနှင်ရန်သို့မဟုတ်လုံးဝထိုက်တန်သည် ရထားခရီးစဉ် from any location in Europe. Bunschoten ရှိသည်3လွတ်မြောက်ရန်အခန်းများ, ဒါပေမယ့်ဓာတ်ခွဲခန်းကအကောင်းဆုံး, ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်ရန်အခန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.
ခက်ခဲသောမစ်ရှင်ကိုပြီးမြောက်ရန်, you will step into Dr. Steiner ၏ဓာတ်ခွဲခန်း, သူကလွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်+ ၇ နှစ်ကအတိုင်းထားခဲ့တာ. မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဆင်းရဲတဲ့ဆရာဝန်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဘဲ, ပြီးတော့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖြေရှင်းဖို့မင်းရဲ့ခွန်အားနဲ့အရင်းအမြစ်တွေအားလုံးကိုစုဆောင်းဖို့လိုလိမ့်မယ် 60 မိနစ်များ. သိသာထင်ရှားတယ်, သင်ယူဆောင်လာနိုင်ခဲ့တယ် 2-3 မစ်ရှင်အတွက်မိတ်ဖက်, ဒါကြောင့်ကြိုတင် booking လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့ကမင်းကိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးလို့ဝမ်းသာလိမ့်မယ်. စိတ်ကူးယဉ်အခန်းလွတ်မစ်ရှင်တစ်ခုစီသည်သင်၏အိမ်တံခါးမှရထားခရီးတစ်ခုသာဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်“ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအခန်း ၁၂ ခန်း” ကိုသင်၏ site ပေါ်တွင်တင်လိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fbest-escape-rooms-world%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)